HomeWararka CiyaarahaKooxda Liverpool oo iska iibin doonta weeraryahanada Divok Origi iyo Xherdan Shaqiri
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iska iibiso labada xiddig ee Xherdan Shaqiri iyo Divock Origi marka suuqa kala iibsiga dib loo furi doono bisha Janaayo si lacag loogu helo saxiixyada cusub.
Divock Origi ayaa lagu soo bilaabay bilow dhif ah kulankii Atalanta BC horaantii bartamihii isbuucaan ee Champions League, si kastaba ha ahaatee, weeraryahanka reer Belgium ayaa ku dhibtooday inuu gacan ka geysto guuldaradii 2-0 ee kooxdiisa.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa soo jeedisay in 25 jirkaan weerarka ka ciyaara uu u furan yahay inuu ka tago Merseyside Reds inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga bisha Janaayo isagoo isha ku haya inuu boos ka helo xulka Belgium xagaaga soo socda horyaalada Yurub.
Shaqiri, dhanka kale, wuxuu ciyaaray kaliya labo kulan Premier League ololahan sidoo kale wuxuu hoos udhacayaa kala sareynta marka ay timaado xulashada ciyaartoyda XI ee kooxda.
Sida laga soo xigtay The Express, kooxda Jurgen Klopp ayaa raadineysa inay u dhaqaaqdo labada ciyaaryahan 2021 si ay u xoojiso xirmahooda suuqa kala iibsiga, iyagoo xooga saari doona daafac dhexe oo cusub in ay lasoo wareegaan maadaama ay soo noq noqdeen dhaawacyada difaacyada Joe Gomez iyo Virgil van Dijk.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa ciyaari doonta Premier League ayaga oo ka hor imaan doona Brighton & Hove Albion galabnimada Sabtida waxayna rajeynayaan inay xaqiijiyaan guulahooda is xig-xiga.